Uma ubheka uhlu imithwalo Marketing, abalwe isayithi search emisebenzi, ungabona izinto eziningi ezithakazelisayo. Tinhloko izinkampani ozama ukuphoqelela ukumaketha imithwalo yemfanelo eyengeziwe. Mhlawumbe kahle namaqiniso Kwimakethe - omunye abasebenzi uchwepheshe wenza umsebenzi, kodwa kukhona izinto marketer akudingeki, noma okungenani yenze yonke imizamo ukugwema ukusebenza kwalezi imisebenzi.
Manje amaphuzu nge incazelo emfushane kanye nezinye wemfanelo.
Thenga zokubhala kanye emaphaketheni.
Kufanele wenze lokhu ngabantu abaqeqeshiwe ngubani kudingeka ukuthi unikeze inhlangano yakho ngayo yonke kunesidingo. Okuwukuphela uma lokhu Office liyadingeka wena uqobo. Kulokhu, kuthatha lwemibhalo zilotshiwe izihloko kudingekile, okuyinto, ecacisa inombolo wadlulela inkonzo abezokuphepha bangaphakathi.
Yebo kunjalo, ukudweba, ukwenza onobuhle lamapheshana, izincwajana nezinye izinto yokukhangisa. Ukuze wenze lokhu, kukhona abaklami. Qasha abasebenzi umklami hhayi imfucuza ezifana enkulu imali. Asikho isidingo sokuphinda esigcwele iyunithi - babe abazisebenzayo abazimisele ukuthatha emisebenzini enjengokwakha. Ngaphezu kwalokho, marketer owazi Uhlelo ihluzo, iholo kuyoba ezibizayo.
Njengoba ngokuvamile kwenzeka - ungenisa amapheshana kanye nibekezelelana akekho futhi ukuthengisa emigwaqweni futhi glues uqobo empilweni. Qasha othile. Lo msebenzi akudingi amakhono akhethekile, nokumaketha omholo wazo kufanele ucabange indlela ukwandisa yokuthengisa.
A Eqinisweni owaziwa - ulwazi kumele ibuyekezwe. Ingabe kule sayithi noma ibhulogi yenkampani (lapha ngokuvamile okuqukethwe okudingekayo njalo), kodwa can a ukukhululwa press noma isihloko ephephandabeni - ukubhala konke lokhu kungamboza ububi kuthatha isikhathi, kwesinye isikhathi kungangenzeki encane. Ngaphandle-ke umphathi we Umnyango wezokumaketha wesikhathi mahhala imoto (ngisho weloli elithile elincane), khona-ke ngicela wayekwenza. Kodwa kuphakama umbuzo: kuphi marketer isikhathi esikhululekile? Futhi lesi sihloko, ungakwazi noma ukubhala phakathi izikhathi (nge izinga elifanele), noma yalela umuntu oqeqeshiwe.
Letha indawo (ibhulogi webhizinisi) engqondweni.
A marketer abakwazi ukwazi izinto eziyisisekelo isakhiwo site, futhi, kunabantu abaqeqeshiwe. A marketer Ungasetha imigomo: ifoni kufanele kube phezulu efomini komyalelo wokungabi 10 Amasimu, kodwa kufanele asebenzise wonke amanye. Uma umphathi uyazi izisekelo zewebhu - isakhiwo, plus, kodwa ukwenza kanjalo-ke akufanele umsebenzi.
Beka izinto ifa.
Lena kusukela uchungechunge efanayo, futhi nibekezelelana izikhangiso. Akubalulekile salokhu spice.
Balungise iphrinta nezinye izinto ehhovisi.
Ezweni lanamuhla nje egcwele ubuchwepheshe, akekho izingxabano. Futhi musa ukuphika abakhangisi abaningi, kanye, kanye nanoma yimiphi eminye ochwepheshe wake ukwenza ngendlela oyifisayo imishini ehhovisi futhi bayilungise. Kodwa lena kuphela wentele kutijabulisa, kutfola noma ukusetshenziswa ekhaya. Emsebenzini, nezinto ezifana nalokho okwadingeka abhekane nabo abasebenzi IT, futhi kumelwe asebenze ngokushesha ukuze singathwesi ulinde ihora, futhi, ngaphandle kokulinda ukwenza yonke into ngokwakho.
Ngale ndlela marketer ungakwazi kuphela egqekeza lemibuzo, ukuhlola ukusebenza kwawo (uma ufuna ukuhlela). Kodwa 20-30 amaphrofayli, engasekho. Yonke enye into lingashajwa umfundi ngoba ama-ruble ayizigidi ezinhlanu, noma uma udinga yi eliphezulu, ukuphathisa inkampani Outsourcing onguchwepheshe.
Ukuhlehlisa icala kuze kamuva.
Abakhangisi kudingeka senze konke ngokushesha. Izwe lishintsha ngokuphazima kweso. Izolo sika amathuluzi namuhla kungaba isasebenza. Ngisho ayilibalanga daba ziyolibaleka. Ungavumeli lokhu marketer - irekhodi, kanye zokukhokha ecacile futhi ucele kungakapheli ngosuku olubekiwe.
Yenza izinqumo esisekelwe kokuhlangenwe nakho kwawo siqu, kunokuba ekuhlaziyweni umbono nezithameli.
isipiliyoni Siqu - ngokuqinisekile enhle, kodwa zingase zishintshe kakhulu kusukela izintandokazi of kanti nabantu abahlosiwe. Futhi ukwenza isinqumo esifanele lo mbono, kuzomele uqale uthole, noma kuphela ngesisekelo ukuhlaziywa idatha ukwenza noma iyiphi iziphetho. Kungcono ukuvumela kuthathe isikhathi esithe xaxa. Futhi uma kungenjalo kanjani.
Hlala izandla lapho uwa ukudayiswa.
Marketer ehola hhayi ukuthi ungaphakathi ehhovisi kusuka 9 18. umsebenzi wayo ukuba kwandiswe yokuthengisa. Futhi uma bengekho kuze kube par, futhi uzuze ngokwengeziwe ukuba bawe - marketer nje ukuthatha noma yisiphi isinyathelo. Futhi hhayi ukulingisa ezenzweni zobudlova, kodwa empeleni uxazulule izinkinga.
Ukuze wenze into ngenxa nje yokuthi "thina njalo wenza kanjalo," noma "Manje bonke abantu abaya ocansini."
Nalapha futhi, mayelana noshintsho isimo emakethe nezwe wonkana. Njengenjwayelo, akusebenzi manje. Sidinga okuthile okusha. Futhi ngaphezu kwalokho, hhayi nje entsha futhi okungezona ezijwayelekile, singafani nhlobo. Yazisa abanye abanyathela amanzi, marketer has ukuhambisa inkampani phambili.
Ungayizibi izici ezintsha.
Uma kukhona ithuba ukwandisa yokuthengisa noma ukunciphisa izindleko ngokusebenzisa amathuluzi amasha, kubalulekile ukulisebenzisa. Usangayizama isampula elincane amakhasimende, izinto eziningi ezincane futhi uma umsebenzi, ukusebenzisa uquqaba. Ngisho noma kungasebenzi, ayeke bese ukhohlwa ngayo njengoba okwakwenzeka, enza konke okusemandleni akhe ukuze uthole amathuba amasha.
Ukuhlakulela umphathi ukumaketha - 'lifile.' Izwe lishintsha, kufanele ushintshe futhi amathuluzi ishintshwa kangaki abantu. Ngisho noma ungakwazi ukunikeza uqeqesho marketer, kukhona njalo ukuthi kungenzeka self-imfundo. Kakade ambalwa izincwadi ngenyanga ingafundwa njalo, uma ufisa, kodwa uma isifiso sokufunda elahlekile - kufika 'sebefile "onguchwepheshe. Ngemva kwalokho, kubalulekile ukuqala kabusha futhi bachitha isikhathi esiningi kanye nemali.
Ukucabanga ngendlela indoda kufanele imphathe umuntu
Ishidi onesici ekwakheni: isampuli